बिक्रीको लागि मह भरिने मेशीन - Npoat.com
मह संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय प्राकृतिक स्वीटनर हो र मौरी उत्पादनको विश्वव्यापी व्यापार हरेक वर्ष लाखौं डलरको हुन्छ।
यसको विविध प्रयोगका कारण, विश्वव्यापी महको उपभोग यति विशाल छ कि आपूर्तिले मात्र मागको सामना गर्न सक्छ। माहुरीका उत्पादनहरू विभिन्न खाद्य पदार्थहरूमा प्रयोग गरिन्छन् र औषधी, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक उत्पादन, र महल सहित धेरै उद्योगहरूमा व्यापक प्रयोगको आनन्द लिन्छन्, र एक अपवित्र र सुपरस्याचुरेटेड चिनी समाधान हो - एक प्राकृतिक, मौलिक, मिठाई। यसको अवयवहरूको अनौंठो संयोजनले महलाई आहारमा एक मूल्यवान थप गर्दछ।
यो यसको स्वाद र स्वाद को लागी लोकप्रिय छ। यसको प्राकृतिक मिठास र रासायनिक गुणहरूको कारण, यसलाई प्रशोधित चिनी र बेकिंग, पेय पदार्थ, र खाद्य पदार्थहरूमा प्रयोग हुने अन्य स्वीटनरहरू भन्दा बढी मनपर्दछ। प्राकृतिक उपचार।
संसारमा शीर्ष १० प्रकारका मह
जंगली मह, सम्पूर्ण विश्वमा सब भन्दा राम्रो मह, सिदर रूखबाट यसको फलहरू गाढा खैरो हुनु अघि र यसको राम्रो गन्ध लिनुबाट नै लिइएको हो।
स्वाद र घनत्व मा माहुरीको मह को अन्य प्रकारहरु भन्दा फरक, र यो दुई वर्षको लागि यसको गुण राख्न सक्छ।
गोभी को मह
महको सिदर भन्दा कम महत्त्वको छैन, यो जंगली क्याक्टस बोटबाट लिइएको हो, यसका धेरै फाइदाहरू छन्, यसले त्यस बोटमा समावेश सबै पौष्टिक गुणहरू प्रदान गर्दछ।
यो इरेक्टाइल डिसफंक्शनको लागि सहायक उपचारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, कलेजोको कार्यलाई सक्रिय गर्दछ, र धमनीहरूको रोगहरूको उपचारमा मद्दत गर्दछ, र यो मह पाचन प्रणालीको रोगहरूको लागि आदर्श हो, यो एनीमिया, जलोदर, गठिया, दाँत दुख्ने र गाउट रोग
यो सिट्रस रूखहरू जस्तै सुन्तला, कागती, मन्दारिन र अन्य रूखहरूबाट लिइएको हो।
यसको रंग सेतो छ र यसको घनत्व कम छ, जसमा उच्च प्रतिशत एस्कोर्बिक एसिड समावेश छ।
यो जंगली केना बोटबाट लिइएको हो, यसको गाढा रंग, राम्रो गन्ध, र एक अनौंठो स्वाद छ, यसका धेरै फाइदाहरू छन्, यसले दम, एलर्जी जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूमा मद्दत गर्दछ, थुतुको लागि थुक्दा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। , र यसले किडनीलाई मर्मत गर्न पनि काम गर्दछ र शरीरलाई डिटोक्सिफाइ गर्न मद्दत गर्दछ
यो अल्फाल्फा फूलबाट निकालिन्छ, महले अस्थिर तेल समावेश गर्दछ, र कोभरिनमा पनि रंग रंग हल्का पहेलो हुन्छ र यसका धेरै फाइदाहरू छन्, यो प्रकार शरीर र उर्जाको एक शक्तिकर्ता हो।
यो मह सूर्यको फूलबाट निकालिन्छ, र यसको रंग पहेंलो र सुनौलो हुन्छ, र जब यो क्रिस्टलाइज हुन्छ, र gra्ग अ .्ग्रेजी हुन्छ, हल्का गन्ध हुन्छ, र अलिकति तीखा स्वाद हुन्छ।
यो कपासको बोटको फूलबाट लिइएको हो। यो यसको सुन्दर गन्ध, स्वादिष्ट स्वाद र हल्का घनत्वको विशेषता हो
यो सेतो हुन्छ जब यो स्थिर हुन्छ, एनीमियाको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
कालो सिमीको बीउबाट निकाल्ने धेरै फाइदाहरू छन्, र यसले रक्त परिसंचरणलाई उत्प्रेरित गर्ने काम गर्दछ र शरीरमा प्रतिरोध क्षमतालाई मजबुत पार्न काम गर्दछ।
कालो carob मह
यो धेरै राम्रो मह छ, यसको रंग पारदर्शी छ र सेतो हुन्छ र यदि क्रिस्टलीकृत छ भने द्रव्यमान जस्तो, र कब्जको अवस्थामा उपयोगी छ।
मह कसरी बनाइन्छ?
एक औसत औँलीको उपनिवेशले प्रत्येक वर्ष -1०-१०० एलबी (२.2.२-4545. kg केजी) मह उत्पादन गर्दछ।
Ies०,०००-70०,००० कामदारहरू, एक रानी, र २,००० ड्रोनहरू: कालोनीहरू श्रमको तीन-स्तरीय संगठनद्वारा विभाजित हुन्छन्।
मजदुर माहुरीहरू केवल तीन देखि छ हप्ता सम्म जीवित हुन्छन्, प्रत्येकले लगभग एक चम्मच अमृत संकलन गर्दछ। एक पाउन्ड (०..454 केजी) महलाई l lb (१.8 केजी) अमृत चाहिन्छ, जसलाई स million्कलन गर्न दुई लाख फूल चाहिन्छ।
जब कामदार माहुरीहरू करीव २० दिन पुरानो हुन्छन्, तिनीहरूले अमृत स they्कलन गर्न घारमा छोड्छन्, फूलहरूको ग्रन्थिले उत्पादन गरेको मिठो स्राव। माहुरीले फूलको पंखुडीमा प्रवेश गर्छ र उसको जिब्रोले अमृत छोड्छ र अमृतलाई महको थैली वा पेटमा राख्छ। मौरीको शरीरमा अमृत यात्रा गर्ने बित्तिकै पानी बाहिर निकाल्छ र मौरीको आन्द्रामा जान्छ। माहुरीको ग्रन्न्डुलर प्रणालीले अमृत समृद्ध गर्ने एन्जाइमहरू निकाल्छ।
परागकणको दाना प्रक्रियामा मौरीको खुट्टा र कपालहरूमा संलग्न हुन्छन्। यसका केहि फूलहरू त्यसपछिका फूलहरूमा झर्छन्। केहि अमृतको साथ मिक्स गर्दछ।
जब कामदार मौरीले अब अर्को अमृत समात्न सक्दैन, उनी हाइफमा फर्किन्छिन्। प्रशोधित अमृत, अब मह बन्न जाँदै छ, खाली महकोट कोशिकाहरूमा जम्मा गरियो। अन्य कामदार मौरीले माहुरी पकाउँदछन्, अधिक इन्जाइमहरू थप्छन् र महमा पाकेको छ। जब मह पूर्ण रूपमा पाक्दछ, यो एक मधुकोश कोषमा पछिल्लो पटक जम्मा गरिन्छ र मैनको पातलो पत्रको साथ क्याप गरिन्छ।
पूर्ण हनीकम्बस हाइभबाट हटाईयो
हनीकम्ब्स हटाउन, माहुरीपालले घुमाउरो हेलमेट र सुरक्षात्मक पन्जा लगाउँदछ।
कंघी हटाउनका लागि त्यहाँ धेरै विधिहरू छन्। माहुरीपालन गर्नेले माहुरीलाई कंघीबाट झार्न र छाउनीमा फिर्ता मार्गदर्शन गर्न सक्छ।
वैकल्पिक रूपमा, माहुरीपालले घारमा एक धुवाँ पक्छ।
माहुरीहरू आगोको उपस्थिति महसुस गर्दै तिनीहरू भाग्नु अघि उनीहरूसँग जतिसक्दो लिनको लागि महमा डुबेका थिए।
थोरै किसिमले स by्क्रमित गरेर, माहुरीले घुँडा टेक्ने सम्भावना कम हुन्छ जब हाइभ खोलियो।
तेस्रो विधिले ब्रुण्ड च्याम्बरबाट मह कोठा बन्द गर्न विभाजक बोर्डलाई काम गर्दछ। जब मह कोठामा रहेका माहुरीहरूले पत्ता लगाउँदछ कि उनीहरूलाई आफ्नो रानीबाट अलग गरिएको छ, तिनीहरू हेचबाट बाहिर जान्छन् जसले तिनीहरूलाई ब्रुड कक्षमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ, तर मह कोठामा पस्दैन।
विभाजक बोर्ड हनीकम्ब हटाउनको लागि करिब दुई देखि तीन घण्टा सम्म सम्मिलित गरिन्छ।
कंघीको कोषहरूको बहुमत क्याप गरिएको हुनुपर्दछ।
माहुरीपालनीले यसलाई हल्लाएर कंघीको परीक्षण गर्दछ। यदि मह बाहिर निस्किन्छ, क the्ग धेरै धेरै दिनको लागि मह कोठामा पुन: सम्मिलित गरिन्छ।
कलोनीलाई खुवाउन महको झन्डै एक तिहाइ भाग घारमा छोडिन्छ।
हनीकम्ब्स अनप्याप गर्दै
कम्तिमा दुई तिहाई क्याप्ड हनीकम्ब्सलाई यातायात बाकसमा राखिन्छ र माहुरीबाट मुक्त भएको कोठामा लगिन्छ। लामो-ह्यान्डल अनप्याing्ग फोर्कको प्रयोग गरेर, माहुरीपालले हनीसकम्बको दुबै छेउबाट क्यापहरू क्यापिंग ट्रेमा स्क्र्याप गर्दछ।
कंघीबाट मह निकाल्ने
महकोम्बहरू एक्स्ट्रक्टरमा घुसाइन्छ, एउटा ठूलो ड्रमले मह निकाल्न केन्द्रापसारक शक्ति प्रयोग गर्दछ। किनकि पूर्ण कंघीले l lb (२.२ kg किलोग्राम) सम्म तौल गर्न सक्दछ, कम्ब्स ब्रेक हुनबाट रोक्नको लागि एक्सट्रक्टर एक सुस्त गतिमा सुरु हुन्छ।
एक्स्ट्रक्टर स्पिन भएपछि, मह भित्ताहरू बाहिर बाहिर तानिन्छ। यो शंकु आकारको तल ड्रिप हुन्छ र स्पिगट मार्फत एक्स्ट्रक्टरबाट बाहिर। स्पिगट मुनि राखिएको दुईवटा सिभ, एक मोटो र एक जुलाइले माथि राखिएको मह बाल्टे हो, मोम कणहरू र अन्य मलबेहरू पछाडि राख्न। मह ड्रममा खसालिन्छ र व्यावसायिक वितरकमा लगिन्छ।
प्रशोधन गर्दै र बोतल गर्दै
व्यावसायिक वितरकमा, मह ट the्कीमा खन्याइन्छ र क्रिस्टलहरू पग्लनको लागि १२० °f(.9 48..9 डिग्री सेल्सियस) मा गरम गरिन्छ। त्यसोभए त्यो २ temperature घण्टासम्म तापक्रममा राखिन्छ।
कुनै पनि बाह्य माहुरीका भागहरू वा परागकण शीर्षमा उठ्छ र स्किम्ड हुन्छ।
त्यसपछि महको अधिकांश भाग १ flash5 °f(.8 73..8 डिग्री सेल्सियस) मा फ्लश गरिरहन्छ, कागजको माध्यमबाट फिल्टर गरीन्छ, त्यसपछि फ्ल्यास पछाडि तल १२० °f(.9 48..9 ° c) सम्म चिस्याइन्छ।
यो प्रक्रिया लगभग सात सेकेन्डमा धेरै छिटो गरिन्छ।
यद्यपि यी तताउने प्रक्रियाहरूले महका केही स्वस्थ गुणहरू हटाउँदछन्, उपभोक्ताहरू हल्का, चम्किलो रंगको महलाई प्राथमिकता दिन्छन् जसले परिणाम दिन्छ।
एक सानो प्रतिशत, सायद%%, अप्रकाशित छोडियो। यो केवल तनावपूर्ण छ।
मह गाढा र बाक्लो छ, तर यो असीमित महको लागि केही बजार छ।
मह त्यसपछि खुद्रा र औद्योगिक ग्राहकहरु लाई ढुवानी को लागि जार वा डिब्बे मा पम्प गरिन्छ।
महको लागि अधिकतम usda आर्द्रता आवश्यकता १ 18..6% छ। केही वितरकहरू आफ्ना आवश्यकताहरू एक प्रतिशत वा अधिक कम सेट गर्नेछन्। यो हासिल गर्न, तिनीहरू प्राय: माहुरीपालकहरूबाट प्राप्त गरिएको महलाई मिसाउँदछन् जुन महमा उत्पादन गर्दछ जुन चिस्यान मात्रा, र color र स्वादमा मिल्दछ।
माहुरीपालकहरूले महको गुणस्तर र मात्रा सुनिश्चित गर्न वर्षभर उनीहरूको अनुहारको लागि उचित मर्मत गर्नुपर्छ। (कीट रोकथाम, घारमाको स्वास्थ्य, आदि) तिनीहरूले पनि भीडभाड रोक्न पर्छ, जो swarming र नयाँ उपनिवेशहरूको विकास निम्त्याउँछ। फलस्वरूप, माहुरीले नयाँ कामदारहरूको लागि मह बनाउनु भन्दा धेरै समय निकाल्ने र हेरचाह गर्न बढी खर्च गर्ने थियो।
कसरी तपाइँ तपाइँको उत्पादन को लागी सही प्याकेजि and र सही भरिने मेसिन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईको आवश्यकताको लागि उत्तम मेसिन फेला पार्नको लागि, निम्न उत्पादन सुविधाहरू विचार गर्नुहोस्
चिपचिपापन भनेको के हो? उत्पादन क्षमता के हो? रासायनिक संरचना? त्यहाँ भागहरु छन्?
मेशिन कहाँ स्थित हुनेछ? बिजुली चाहिन्छ? बिजुली खपत? कस्तो प्रकारको सफाई र मर्मत प्रक्रियाहरू आवश्यक छ? के यसलाई एयर कम्प्रेसर चाहिन्छ?
कस्तो प्रकारको टोपी चाहिन्छ? स्क्रू, प्रेस-अन वा मोड - अफ? के मेशिन स्वचालित वा अर्ध-स्वचालित हो? के यसलाई आस्तीन संकुचन आवश्यक छ?
सस्तो भरिने प्याकिंग जार मह बोतलिंग मेशीन
सस्तो भर्ने प्याकिंग जार हनी बोतलिंग मेशिन १. स्वचालित मह फिलि machine मेशिन NP-VF स्वचालित मह भरने मेसिन विशेष प्रकारको चिसो महलाई गिलासको भाँडाहरू र पालतु बोतलहरूमा भर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो, यो पनि मह भरी, मह जार प्याकिंग मेसिन हो। मौरीको कारखानाका लागि यो एक उत्तम विकल्प हो। २.विभिन्न प्रकारका NPACK स्वचालित मह भरने मेसिन छन् ...
तातो बेच्नुहोस् ग्यालन हनी भरिने मेसिन M मि.लि.
यस उत्पादन लाइन द्वारा बोतलको नमूनाहरू प्याकेजि Main केहि मुख्य सुविधाहरू १. पिस्टन पम्प mm एमएम मोटा स्टेनलेस स्टील 6१6 एल छ, २. सीलिंग रिंगको बारेमा जुन years बर्षसम्म काम गर्न सक्दछ, र अन्य कम्पनीहरूको साझा मोहरको समयले यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। समय मा। Its. यसको सर्वो मोटर ड्राइभ, ग्राम समायोजित गर्न सजिलो, केवल आवश्यक छ ...